Soomaali / Qoysaska ku Cusub Saint Paul Public Schools
Qoysaska ku Cusub Saint Paul Public Schools:
Degmada SPPS waxay dhammaan ardayda fasallada K-12 siinaysaa waxbarasho, iPadyo, iyo caawin dhanka helidda WiFi . Boggan wuxuu caawin qoysaska cusub oo wuxuu siin xog iyo macluumaad quseeyo iPad-yada iyo Waxbarashada Durugsan (Distance Learning).
Waxbarashada waxay ku baxaysaa isticmaalka aalado waxbarasho oo intarnetka ah iyo iPad-yo ay Degmada SPPS bixisay.
iPad-yada waa la siin dhammaan ardayda dhigato fasallada K-12.
Ogow iPad-yadu waa qeyb ka mid ah waaxda Degmada SPPS ee qaabilsan waxbarashada shaqsiga ardayga ah (Personalized Learning) taasoo waxbaridda iyo waxbarashada ku xirto baahiyada kala duwan ee arayda kala jaadka ah ee Saint Paul Public School. Waxbarashada shaqsiga ardayga ah markii uu ardaygu isku qoro:
Macallimiintu waxay heli karaan tacliin tayo leh oo buuxinaysa heerkii ay Degmadu ka rabtay inay tacliintu joogto iyadoo isla markaana la kobcinayo arday walba shaqsi ahaantiisa qaabka uu wax u barto.
Ardaydu waxay heli karaan dhowr qaab oo ay xog ku helaan, maanka ka shaqeysiiyaan, kuna muujiyaan wixii ay barteen.
Barnaamijka Student voice and choice ayaa kaalin fiican ku leh in ardaydu ka qayb qaataan waxbarashada iyo wixii ay kala kulmaan fasalka. Waxbarashada shaqsiga ardayga ah waxay ardayda baraysaa sida ay danahooda waxbarasho ugu doodaan oo ay masuul isaga saaraan.
iPad-yada loogu talogalay ardayda cusub ee SPPS
iPad-yada waxaa ardaygaaga loo sii diyaarshaa markii iskoollada SPPS lagu qorayo. Qoyskaaga waxaa iPad loogu soo wici karaa 48 saacadood gudahood markii ardayga lagu qoro iskool. Haddii loo baahdo waxaa jiro fursado kale guriga lagu keeni karo aaladdan iPad-ka.
Dhammaan iPad-yada la siinayo ardayda cusub dib ayaa loo habeyn oo la sii diyaarin intii suurtowda Waxaa kaloo qofka loo raacin iPadk-ka warqado ay ku qoran yihiin sirta lagu galo iPad-ka iyo sida loo isticmaalo.
Haddii uu iPad-kaagu hallaabo ama in la beddelo ay noqoto, fadlan soo sheeg adigoo email ama taleefan kula soo xiriirayo waaxda tiknoolajiyadda ee Saint Paul Public Schools Technology Services:
Haddii aad dhib ku qabtid iPad-ka, waxaad kaloo la xiriiri kartaa macallinka ardaygaaga ama iskoolka.
Liiska Iskoollaa SPPS (School Directory)
Markii aad soo sheegtid dhib jiro, qof ka mid ah shaqaalaha tiknoolajiga SPPS ee dadka caawiyo ayaa kula soo xiriirayo isagoo kaala hadlayo fursadaha beddelista iPad-ka si ay waxbarashadii u sii socoto iskoollada Saint Paul.
Bogga Waalidka ee Campus Parent
Bogga Campus Parent waxaa ku jiro xog muhiim ah oo ardayda quseysa iyo waxyaalo kale oo anfacayo waalidka iyo mas’uulka guriga. Guji batoonka “Login” ku qoran tahay ee midigta xigo si aad u gashid xogta iyo waxyaalaha ku jiro Campus Parent.
Jadwalka Maaddada: Jadwalka fasalka ee ardaygaaga, buundada meesha ay u marayso, iyo buundada kama dambaysta ah.
Fasalka Ardayga (ardayda dugsiga sare keliya): Buundada ardaygaaga ee habeenkii waxaa loo soo diraa Campus iyadoo ka timaaddo Schoology. Fiiri qeybta buundada ee Campus Parent.
Isxaadirinta: Tani waxay ku tusin marka uu cunuggaagu ka maqnaa fasalka.
Tusid: Waxaad halkan ka arkaysaa jadwalka ardaygaaga, kaarka ardayga ee waxbarashadiisa, iyo warqadda ay ku qoran yihiin maaddooyinkiisa iyo buundooyinka uu ka haysto.
Lacagta Cuntada: Waxay ku tusin lacagta ku jirto akoontiga qadada ee ardaygaaga.
Buugta uu la soo Daahay: Waxaa ku qoran buugaagta uu qaatay ee uusan soo celinin.
Baska Iskoolka: Wuxuu ku tusin basaska ardayda qaado iyo xog quseysa meelaha basku soo istaago.
Farriin ka timid Hoggaanka Iskoolka: Mararka qaarkood, lataliyayaasha iskoolka iyo shaqaalaha xafiiska iskoolka waxay isticmaalaah Campus Parent Messenger oo ay kala soo xiriiraan ardayda iyo waalidka. Farriimahan waxay ka soo muuqanayaan qeybta ogeysiiska ee Campus Portal Notification iyo email ahaan.
Xasuusnow: Kala barka teeramka iskoolka iyo buundada uu ardaygu helayo iyo buundada uu aakhirkii helay waxaa labadaba la soo gelin Campus Parent. Buundada maalinlaha ah iyo buundada dhammaadka la helayaba waxaa la soo gelin Schoology.
Wixii xog dheeraad ah ee quseeyo Campus Parent, halkaan guji (click here).
App-ka Waxbarasho ee Seesaw (fasallada PreK ilaa 2)
Ardayda dhigato fasallada K ilaa 2 waxay isticmaalayaan Seesaw oo ah app ku dhex jiro iPad-kooda si ay duruusta u soo diraan, macallinkana ula shaqeeyaan.
Qoysaska: Fadlan ku caawi ardaygaaga in ay diyaariyaan Seesaw si ay guriga ugu isticmaalaan.
Macallinka ilmahaaga wuxuu idiin soo dirayaa lambarka lagu galo Seesaw farriin ahaan ama email ahaan.
Lambarka lagu furto app-ka Seesawga waa 12 lambar, sidan oo kale: AAAA AAAA AAAA
Xog dheeraad ah iyo caawinaad quseysa Seesaw halkan ka gal (additional information and support about Seesaw is here).
App-ka Waxbarasho ee Schoology (fasallada 3 ilaa 12)
Schoology waa goob khatka intarnetka isticmaasho oo lagu maareeyo waxbarashada taasoo kaa caawinayso inaad xog-ogaal u noqotid fasallada uu qaato ardaygaaga, duruustiisa, iyo buundada uu helo. Waxaad isticmaali kartaa Schoology si aad:
U aragtid maaddooyinka ardaygaagu dhiganayo iyo kooxda uu kala shaqeynayo duruusta
U aragtid duruusta iyo laylisyada soo socdo ee ardaygaaga, kuwa uu hadda ka shaqeynayo, iyo kuwii uu la soo daahay
Si aad dusha kala socotid ogeysiiska iskoolka iyo fasallada
Uga qeyb qaadatid waxbarashada ardaygaaga
Waalidka sida uu u isticmaali karo Schoology (Parent Guide to Schoology)
Wixii xog dheeraad ah ee quseeyo Schoology, guji halkan.
Haddii aad adiga ama uu ardaygaagu qabo su’aalo quseeyo sida loo isticmaalo app ku jiro iPad-ka, booqo boggan si laguu caawiyo.
Asluubka Isticmaalka Intarnetka ee Ardayda SPPS
Asluubka isticmaalka intarnetka waxaa looga jeedaa in shaqaalaha iyo ardayda ay si habboon oo masuuliyad leh u isticmaalaan tiknoolajiyadda. Annagoo bey’adda waxbarasho ee iPad-ka u adeegsanayno qaab ah 1:1, waxaynu dhammaanteen xil iska saaraynaa ammaanka iyo xogta shaqsiyeed ee ardayda aynu isku fasalka nahay.
Annagoo raacayno sharciga heer qaran ee quseeyo badbaadinta caruurta isticmaalayso intarnetka (Children's Internet Protection Act (CIPA)), degmada Saint Paul Public Schools waxay ardayda siinaysaa duruus ku saabsan asluubka isticmaalka intarnetka, ammaanka khadka intarnetka iyo qarinta xogta qofka (privacy), iyo hab-dhaqanka fiican marka lagu jiro khatka waxbarasho ee intarnetka. Degmadu waxay kale oo ay ku boorinaysaa macallimiinta inay ku celceliyaan oo ardayda kala hadlaan asluubka isticmaalka intarnetka inta iskoolladu furan yihiin.
Wixii xog dheeraad ah ee quseeyo Asluubka Isticmaalka Intarnetka (Digital Citizenship) ee SPPS, fadlan guji halaan.
Diyaarinta iyo Ammaanka iPad-ka SPPS
Waxaa iPad-yada ardayga Saint Paul Public Schools lagu soo shubay waxyaalo looga kaashanayo ammaanka oo sidoo kalena ardayda ka caawinayo inay aflaxaan markii ay joogaan gudaha iyo bannaanka iskoolka. iPad-yada Saint Paul uma eka, umana shaqeeyaan sida kuwa laga soo gatay dukaamada Apple Store ama Best Buy.
Waxyaalaha goonida ku ah iPad-yada ardayda waxaa ka mid ah:
Waxaa horey loogu soo shubay barnaamijyo intarnetka kala shaandheeyo. Marnaba ardaygu ma geli karo baraha bulshada sida Facebook, Instagram, Snapchat iyo kuwo kaleba. Waxyaalaha dadka waaweyn ee anshaxa xun waa laga xiray iPad-ka xilli walba.
Ardaydu ma isticmaalayaan Apple ID, waxayna isticmaali karaan keliya qeybta adeegyada iPadka ee Self Service App Store. App-ka ku jiro Self Service waxaa loo la soo degi karaa si bilaash ah, oo waa la iska soo hubiyay ammaankooda (security) iyo inuusan dhib ku aheyn xogta qofka (privacy).
Lama isticmaalo karo Facetime, iMessage iyo waxyaalo kale oo aan waxbarashada fasalka loo adeegsaneyn.
Waalidka/Masuulka guriga waxay xaddidi karaan isticmaalka iPad-ka (Screentime Restrictions) iyagoo raacayo tallaabooyinka ku xusan boggan.
Si aad u aragtid waxyaalaha lagu soo shubay iPad-ka, guji halkan.
Daryeelka Ardayda iPadka iyo Rajooyinka
La Soco Horumanrka Ardayga SPPS waxay ku boorinayaan waalidka iyo mas’uulka inay isticmaalaan iPadka si ay ula socdaan horumarka waxbarasho ee ilmahooda iyo ulana xiriiraan si elektaroonig ah macallinta ilmahooda. Waydii ardaydaadu inay kuu muujiyaan wixii ay soo barteen iyo waxay ku abuureen “created” iPadka, kalana hadal sida ay u isticmaalaan qalabka dugsiga dhexdiisa.
Baraha Campus Mobile App iyo Schoology App ayay waalidiintu isticmaali karaan si ay u la socdaan shaqada iyo natiijooyinka ardaydooda. Fadlan kala xiriir iskuulka ilmahaaga wixii faahfaahin ah.
Waalidku sidoo kale wuxuu isticmaali karaa Safari browser app iyaga oo furanaya email shakhsi ah si ay email ooga soo diraan macallinka ilmahooda. Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waa in aysan Mail app ku jira iPadka ku xirin/darin email kooda shaqsiga ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa in emailada shaqsi ah ay arkaan qof kasta oo gacanta ku dhiga iPadka.
Talooyin Muhiim ah oo iPad Quseeyo
Waaxda Waxbarashada Shaqsiga u Goonida ah waxay heysaa talooyinkan: talooyin quseeyo sida loo isticmaalo iPadka.
Daryeel ka iPad-ka iyo Habka fiican ee loo Isticmaalo
Mar walba iPad-ka galkiisa ha ku jiro
Ha kala qaadin galka iyo meesha wax lagu qoro (keyboard) haddii aadan u baahan inaad sawir ku qaaddid iPad-ka ama aad qabatid hawl taas la mid ah
Isku laab galka leh meesha wax lagu qoro, oo iPad-ka labada gacmood ku qaad adigoo shafka ku tiirinayo, ama sidii buugga u qaad, ama boorso ammaan ah ku xir.
Soco marka aad waddid iPad-ka oo ha qaadin iPad-ka isagoo ku jiro galka buugaagta (folder) ama galka aan boorsada aheyn (trapper keeper)
Ka ilaali iPad-ka biyaha ama meel kulul, oo ha uga dhex tegin gaari qabow ama.kulul.